Sing Swim Sway.....: ကဏန်းပျော့ မွေးမြူမှု ပိုမို တွင်ကျယ်လာဖွယ်ရှိ
ကဏန်းပျော့ မွေးမြူမှု ပိုမို တွင်ကျယ်လာဖွယ်ရှိ
ရေထွက်ကုန်များထဲမှ အမြင့် ဈေးရရှိနေသော ရေငန်ပုစွန်ကျား ထက် ကဏန်းပျော့ဈေးမှာ ပိုမိုမြင့် တက်လာပြီး ကဏန်းပျော့ဈေးကွက် ရှေ့အလားအလာမှာလည်း ကောင်း မွန်နေသည့်အတွက် ကဏန်းပျော့ မွေးမြူမှုမှာ တွင်ကျယ်လာဖွယ်ရှိ သည်ဟုမွေးမြရြေးလုပ်ငန်းရှင်များ ထံမှ သတင်းရရှိသည်။
Ref : Weekly Eleven Journal
ရေငန်ပုစွန်ကျားမှာ လက်ရှိအ ချိန်တွင်အကောင် ၅ဝ ပါတစ်ကီလို ဂရမ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၂ ဝန်းကျင်သာပေါက်ဈေးရှိ ပြီး ကဏန်းပျော့မှာမူတစ်ကီလိုဂရမ် လျှင် ငါးဒေါ်လာမှ ခြောက်ဒေါ်လာ ကြားပေါက်ဈေးဖြစ်လျက်ရှိပြီးရေငန် ပုစွန်ကျား ဈေးအား ကျော်တက်သွား ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ``ကဏန်းပျော့ဈေးဟာ အခုဆို ရင် ဈေးကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ရေငန် ပုစွန်ကျားဈေးကိုကျော်တက်သွားပြီ။ ဒီတော့မွေးမြရြေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ ကလည်း ကဏန်းပျော့ဘက်ကို ပို စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့အတွက်ကဏန်း ပျော့မွေးတဲ့လုပ်ငန်းဟာဧရာဝတီတိုင်း နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာတွင်ကျယ်လာ နိုင်ပါတယ်´´ဟု ကဏန်းပြည်ပတင် ပို့သူလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကဏန်းပျော့ အား မြိတ်ဒေသတွင် မွေးမြကြာ ပြည်ပသို့တင်ပို့လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ကျောက်တန်း ၌လည်းစတင်မွေးမြနြေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် ဧရာဝတီ တိုင်းအတွင်းရှိ ပုစွန်မွေးမြရြေးလုပ် ငန်းရှင်အချို့မှာလည်း ၎င်းတို့၏ လက်ရှိပုစွန်မွေးမြနြေသည့် ဧရိယာ အတွင်းကဏန်းပျော့ကိုပါထည့်သွင်း မွေးမြရြန်စီစဉ်နေကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကဏန်းပျော့များ ကို ဟောင်ကောင်၊ တရုတ်(တိုင်ပေ)၊ ထိုင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျက် ရှိကြောင်းနှင့် တင်ပို့သည့်အခါတွင် အခွံမာကဏန်းကဲ့သို့ အရှင်တင်ပို့ ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ အေးခဲ၍တင်ပို့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရက်တိုအတွင်း ဝင်ငွေပြန်လည်ရရှိမည့် ပင်လယ်ရေမှော်ေ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၀ နှစ်ကျော်နေထိုင်လာသူ မြန်မာနှ...
The best of the Google Earth and Maps
မြန်မာအလောင်း (၂၂) လောင်းကို ထိုင်းရေပိုင်နက်တွင် ...
The 10 best downloads of 2007
2550 ธุรกิจประมงสุดอ่วม แห่ทิ้งเรือขึ้นฝั่งหนีขาดท...
မတည်မညိမ် ထိုင်းနိုင်ငံရေး၊ မြန်မာပြည်လို တစ်ခါ အရ...
Future of Maine Aquaculture Looks Bright
เลี้ยงหอยนางรม ที่สุขสำราญ ระนอง
တရုတ်စီးပွား အင်အားထင် သလောက် မကြီးပါ
Trade clampdown reported at Mae Sot border bridge
กูเกิล บริษัทน่าทำงานที่สุดในปี 2007 - Fortune
What Do Venture Capitalists Know?
ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်များက ကြောင်ကိုမကြောက်သော ကြွက်မ...
*မြန်မာ့ငါးမြစ်ချင်းများ ပြည်ပဈေးကွက်တွင် မျက်နှာ...
ASEAN Foundation - AIT Scholarship
พม่าแฉจ่าย9แสนจั๊ตลอบเข้าเมืองระนอง ก่อนผ่านไปมา...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါ ပထမဆုံး လ...
မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းဆက်သွယ် မည့် အပြည်ပြည်ဆို...
คำยอดนิยมปี 2007 โดย Google และ Yahoo
Reader and Talk are Friends!
မုန်တိုင်းသင့်ခဲ့သည့် ဆန်တာဘန်းလမုတောကြီး ပြုစုပျု...
อำเภอเมืองระนองมอบเลข 13 หลักให้คนไทย 53 คน
မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန် - ရန်ကုန်နှင့် အနီးဆုံး အရှေ့...
Zawgyi Unicode, VOA and RSS
ဂျပန်တွင် အကြီးမားဆုံး တရားမ၀င်ငွှေလွှဲမှုဖြင့် မြန်မ...
၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံခြားရင်...
ကိုလိုနီခေတ် သခင်အောင်ဆန်း၏ လွပ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ...
အာရှစီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ADB အစီရင်ခံစာ
ဒေါင်းစုတ်(ဘွတ်ကလုံ)ငှက်များ ရှား ပါး